Waraysi shirka Paris ee isbadalka cimilada - BBC News Somali
Waraysi shirka Paris ee isbadalka cimilada
30 Nofembar 2015
Madaxda Caalamka ayaa maanta uu shir uga furmayaa caasimadda Faransiiska ee Paris, waxaana ay kawada hadlayaan sidii loo heli lahaa heshiis wax ku ool ah oo ay dalalka ka gaaraan dhimista wasakheynta hawada, ee keenta in cimilada adduunka ay kululaato.
Haddaba maxaa keena isbedalka ku imanaya cimilada adduunka? Maxaase lagaga hortegi karaa dhibaatadaasi caalamiga ah?
Weriyaha BBC ee Hargeysa Axmed Saciid Cige ayaa arrimahaasi wuxuu ka wareystay Dr Maxamed Muuse Cawaale oo khabiir ku ah cilmiga deegaanka cimilada iyo daaqa, haddana ah gudoomiyaha hay'adda cilmi baarista deegaanka iyo ka hor-tagga aafooyinka dabiiciga ah ee Somaliland.
Wuxuuna marka hore weydiiyay waxyaabaha keenay in cimiladu adduunku kululaatay sanadahan danbe